Gini mere Dubai ji buru ndi amara nke ndi nlere South East Asia? | Ọrụ - Ọrụ - DCC
E kweere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 16 bịa ileta Dubai kwa afọ - na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ha si mba ndịda n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia dịka Singapore na Thailand, ọ bara uru ịchọgharị ihe kpatara nke a. Site na ụlọ ọrụ ahịa ya ruo ebe zuru oke site na isi ọdụ ụgbọ elu dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, e nwere ọtụtụ ihe kpatara ya Dubai bụ ebe dị mma.
A ohere iji
South East Asia bụ ebe obibi ụfọdụ n'ime akụ na ụba kachasị mma n'ụwa, dịka Vietnam na Thailand. N'ihi nke a, a na-enwewanye ọnụ ahịa dị elu nke ndị mmadụ na ndị ọzọ na-eji ike eme ihe, ha nile nọkwa na-achọ ebe ha ga-esi gbanye ego ahụ. Dubai, na ya ọtụtụ ụlọ ahịa ịzụ ahịa, na-enye ohere magburu onwe ya ịbanye na ngwaahịa ụfọdụ. Site na ngalaba ụlọ ahịa dị n'akụkụ ebe ọdịda anyanwụ dịka ụlọ ahịa egwuregwu ụmụaka nke Hamley na ụlọ ahịa ụlọ ọrụ Bloomingdale dị na ụlọ ahịa Dubai Mall a ma ama, ọtụtụ ndị na-achọ itinye ego.
Ebe zuru okè
Ịga ezumike na-atọ ụtọ mgbe nile, mana enwere uru na ọghọm dị na ọnọdụ ọ bụla nke ezumike. Ịga ebe dị nso nwere ike ibelata ọdụ ụgbọ mmiri na oge ezumike njem, ma ọ pụkwara ibelata ọkwa dị oke. Akụkụ nke ihe mere Dubai ji mara ndị njem n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ na ọ bụ ntụpọ zuru okè n'etiti ogologo oge na mkpụmkpụ. Ụgbọ elu nke si Bangkok gaa Dubai na-ewe ihe karịrị awa isii, ebe Ho Chi Minh City dị na Dubai karịrị asaa.
E nwere ọtụtụ ụgbọelu dị iche iche na-enye ọrụ na ụzọ dị n'etiti isi obodo Eshia Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Dubai. Emirates, nke bu uzo elu ala nke Dubai na ndi ozo nke United Arab Emirates, na - agba otutu n'ime ha - kama Cathay Pacific, China Southern na ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ site. Ma mgbe ọtụtụ ụgbọ elu na-agba ọsọ na oge na dị ka atụmatụ, ọ bara uru inwe mkpuchi njem chebe onwe gị pụọ n'ihe ndị na-atụghị anya ya mgbe ị na-eme njem, dị ka ịkagbu ma ọ bụ nsogbu njem.
Ọ bụkwa ikpe na e nwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti South East Asia na Dubai, kwa. Ụdị ntụrụndụ ụfọdụ, dịka ịṅụ mmanya na-aba n'anya, adịghị ewu ewu na South East Asia: Indonesia, dịka ọmụmaatụ, nwere ụlọ ọrụ mmanya na-achịkwa nke ọma n'ihi ọtụtụ ndị bi na Muslim. Ụdị ụdị a na-aga nke ọma na Dubai, ebe ọ bụ megide iwu ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya n'ọtụtụ ebe.
Dubai nwere ọtụtụ nkwa maka onye ọ bụla chọrọ ịga leta ya, na ihe niile site na ịzụ ahịa na omenala na-enye ebe a. Nke a na-akọwa ihe mere ndị mmadụ na-eji na-aga ileta ikike ime obodo n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa kwa afọ, na ihe mere ọ ga-eji bụrụ nke a ma ama na afọ ndị na-abịa.